I-Aluminium CNC Machining, Izingxenye ze-Aluminium Ngokwezifiso - I-Createproto - I-Createproto Tech Co., Ltd.
I-SERVICE / CNC Aluminium
Izinsizakalo ze-CreateProto CNC aluminium machining zikunikeza ukunakekelwa okuzungezile ukuthi ithimba lethu lizohlaziya iphrojekthi yakho ngokucophelela futhi liyicubungule ngenqubo esebenza kahle kakhulu ye-aluminium eyakhiwe ukuze isebenzise isikhathi sakho nezindleko zakho.
Singakusiza ukuthi udale ama-prototypes e-aluminium nezingxenye ze-aluminium yangokwezifiso ngonjiniyela bethu bephrojekthi abanolwazi nama-machinists ukuhlangabezana nokucaciswa komklamo wakho.
Uma ufuna umthengisi ukukunikeza izingxenye ze-aluminium ezisezingeni eliphakeme ze-CNC, i-CreateProto ngomunye wemithombo ekwazi ukusebenza futhi engabizi kakhulu esebenza ngokukhiqiza izingxenye ezakhiwe ngomshini emishinini esezingeni eliphakeme ye-3-axis ne-5-axis CNC.
Insizakalo ye-aluminium ye-CNC ye-CreateProto izama ukukunikeza indlela enekhono nekhwalithi ehloniphekile nethimba lochwepheshe elihlaziya iphrojekthi yakho ngokucophelela, lithole ikhambi elingcono kakhulu kuwe futhi licubungule izingxenye zakho ezenziwe ngomshini ngendlela ephumelela kakhulu yokonga isikhathi sakho nezindleko zakho.
Izinsizakalo zethu ze-CNC machining yensimbi, ikakhulukazi ku-aluminium prototyping, i-aluminium machining yangokwezifiso, i-aluminium milling, nokunye ngaphandle kwezingxenye ze-aluminium, sisenayo enye insimbi ye-CNC ethambile efana neMagnesium, iZinc, iTitanium ne-CNC insimbi eqinile efana ne-Steel, Insimbi Engagqwali Zonke izinsizakalo zethu eziyinhloko.
Ithimba leProfessional Aluminium Machining & Experiences
Ukunemba okuphezulu okudingekayo kwe-CNC aluminium machining kuzophakamisa ukugaya ukufeza ukubekezelelana okuphezulu. Ijubane eliphakeme le-3-axis ne-5-axis mpo izikhungo zemishini ze-CNC nolwazi lwethu olukhulu nolwazi olubanzi lusisiza ukuthi sifinyelele ekubekezelelaneni okuqinile, ukuthola izingxenye zakho ze-aluminium ngaphandle kwesikhathi. Ukunemba kwethu okujwayelekile kokubekezela kusuka ku- +/- 0.005 "(+/- 0.125mm) kuye ku- +/- 0.001" (0.025mm) ye-CNC aluminium. Abaphathi bephrojekthi yethu bazobonisana nawe kuzo zonke izingxenye zephrojekthi yakho futhi bazofuna ukuhlinzeka ngezinga eliphakeme kakhulu lokunemba okungaba khona ngemishini esebenza kahle ngokunemba.
Sithuthukise inqubo esebenza kahle, enembile futhi engabizi eletha imiphumela emihle yemikhiqizo. Amathimba ethu wokuqamba nokuhlela abukeza iphrojekthi ngayinye hhayi ngejubane nje kuphela kepha futhi anembile ukuhlola izindleko, ukwenziwa kwezinto eziyinkimbinkimbi kanye nobunzima ukuqinisekisa ukuthi sihlangabezana nazo zonke izinkomba zohlelo lwakho. Sihlaziya ukwakheka kwakho futhi sifake noma iziphi izidingo ezikhethekile ezinjengezinsimbi, i-EDM noma izinqubo ze-EDM ezidingekayo. Lokhu kuqinisekiswa okujulile kukuqinisekisa ukuthi uthola izinqubo ezisebenza kahle kakhulu zemishini zesabelomali sakho, isikhathi nezinto zokwakha.
Ngemuva kokuthi i-aluminium ye-CNC ithuthukiswe, njengoba kudingeka, singaphinde sinikeze ukucubungula kwesibili nemisebenzi ejwayelekile yokuqedela i-aluminium efana nokuqhuma kwesihlabathi, ukuqhumisa kokudubula, ukupholisha, ukufaka i-anodizing, i-oxidation, i-electrophoresis, i-chromate, i-powder enamathela nokudweba.
Njengakwezinye izinto zokwakha, ukuqedwa kwe-aluminium kuklanyelwe ukugcina indawo ekhona noma ukuthuthukisa okusha okubukeka ngokubonakalayo noma okusebenzayo. Ngesikhathi sokucubungula, besilokhu sixhumana namakhasimende ethu axhumana nemfuneko yokuqeda okuthunyelwe. Futhi sihlala siphendula yonke imibuzo ngenkathi ukuqeda ubuso ukuqinisekisa ukuthi lokho kuzokunikeza ukubukeka okufunayo.
I-5-axis CNC Milling Aluminium
I-CreateProto inikezela ngezinsizakalo ezithuthukisiwe ze-5-axis machining ezandisa kakhulu ububanzi bamathuba wokudala izingxenye ngezimo nobukhulu obuhlukahlukene. Imishini ye-5-axis CNC yokugaya ingenza imishini ephezulu kakhulu yokugaya nokugaya izingxenye eziyinkimbinkimbi ezizokusiza uhlangabezane nezinselelo zakho ezinzima kakhulu zokukhiqiza.
Sineqembu elinolwazi lonjiniyela nabasebenza ngemishini abakwaziyo ukwenza ngokunemba imisebenzi ye-CNC yokugaya besebenzisa uhlu olubanzi isoftware yobuchwepheshe bamuva ukubhala indlela yethuluzi esebenza kahle kakhulu. Sithuthukise inqubo esebenza kahle, enembile futhi engabizi kakhulu ukusunduza imishini yethu kumakhono ayo aphelele aletha imiphumela ephezulu.
Izinzuzo ze-5-Axis Machining
Esikhungweni semishini eyi-5-axis machining, ithuluzi lokusika lihamba linqamule izimbazo eziqondile ze-X, Y ne-Z futhi lijikeleze kuma-axes A no-B ukuze lisondele esiqeshini somsebenzi lisuka kunoma iyiphi indlela.
Umshini ezinhlangothini ezi-5 zengxenye ngokusethwa okukodwa.
Igcina isikhathi sokusetha, ikhuphula umkhiqizo wemishini.
Ukunemba okuphezulu nokuqedwa kobuso okuvelele, kuthuthukisa ikhwalithi yengxenye ephelele.
Izingcezu zomsebenzi azihanjiswanga eziteshini eziningana zomsebenzi, zinciphisa izindleko nezindleko zokuthumela, isikhathi sokubekisa isandla esincane.
Ukugaya nokubhola ngama-engeli ahlanganisiwe. Impilo yethuluzi elithuthukisiwe nesikhathi somjikelezo njengomphumela wokutshekisa ithuluzi / itafula ukugcina indawo yokusika enhle kakhulu kanye nomthwalo we-chip oqhubekayo.
Kungasetshenziswa amathuluzi amafushane futhi aqinile. Isivinini sokuphotha esiphakeme namazinga okuphakelayo angatholakala ngenkathi kuncishiswa umthwalo kuthuluzi lokusika.
I-EDM ne-Wire EDM yezingxenye zomshini ze-Aluminium
I-EDM (Electrical Discharge Machining) isetshenziselwa ukugcwalisa ukususwa kwento ebusweni bomsebenzi ngogesi okhipha izinqubo ezikhukhulayo.
Isetshenziswa kabanzi ezingxenyeni ze-aluminium machining njengenqubo yokusiza okusizayo ngoba ezinye izingxenye eziyinkimbinkimbi zingatholakala kuphela ngosizo lwe-EDM. Izingxenye ezibonakala ngesakhiwo esijulile kunzima ukusula amakhona, uma kuphela ukusebenzisa i-CNC machining kuzoshiya irediyasi enkulu emakhoneni, lokhu akuvunyelwe kwezinye izimo. Ngokusebenzisa inqubo ye-EDM kungenzeka ukugcina onqenqemeni olubukhali. Izicelo ze-EDM zifaka ama-Blind Cavities (Keyways), Imininingwane eyinkimbinkimbi, i-Sharp Corners, i-Fine Surface Finishes, i-Thin Walls, njalonjalo.
I-Wire EDM iyindlela yokusika izinsimbi nezinye izinto zokuhambisa, lapho ucingo oluhambayo luhlakazeka khona impahla ngendlela elawulwayo. Ekusikeni ngocingo i-EDM, ucingo lwensimbi (oluvame ukwenziwa ngethusi noma ithusi elihlanganisiwe) luphakathi kuka-0.1 no-0.3 mm ububanzi lusetshenziswa njenge-elektrode empeleni ehlangana nengxenye ezosikwa, ngaleyo ndlela yakhe isimo noma ifomu elifunekayo.
Umehluko phakathi kwe-Sinker EDM ne-Wire EDM ulele kakhulu kuhlobo lwe-electrode elisetshenziswe kunqubo ngayinye, iqiniso lokuthi akukho mgodi ofakwe kusengaphambili odingekayo nge-Sinker EDM, kanye namandla e-3D iSinker EDM ekwazi ukuwafeza, i-Wire EDM inamandla kuphela okukhiqiza izingxenye ze-2D.
Imishini ephansi yevolumu Yezingxenye ze-Aluminium Ngokwezifiso
Umthamo ophansi we-CNC aluminium machining yilokho esivame ukukwenza ukonga imali nesikhathi sakho ezingxenyeni eziyinkimbinkimbi ze-3D uma kuqhathaniswa nokukhiqizwa ngezinye izindlela ezinjengokusakaza noma ukubumba lapho ubuningi bungaphansi kokuphonsa kepha kungaphezulu kwesibonelo. Ukukhiqizwa kwevolumu ephansi kusuka ku-Createproto kuvumela abakhiqizi embonini yezimoto, yezokwelapha noma yezempilo ukuthi bakhiqize imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngezindleko ezishibhile, futhi ngaleyo ndlela ingaletha imikhiqizo ngaphambi kwesikhathi obekuhleliwe.
I-CreateProto inganikela ngezingxenye ze-Aluminium ezenziwe ngomshini nezixazululo.
QALA NGOMSEBENZI WAMAHHALA N0W
Izinsizakalo zethu zemishini zinikela ngamakhono amaningi ngokwezifiso ze-aluminium machining ingenye yamabhizinisi abalulekile futhi athuthukile avela kithi. Ukukhiqizwa okufishane kwe-aluminium machining kuyinsizakalo yebhuloho phakathi kokukhiqiza kanye nokukhiqiza ngobuningi esikunikezayo.
Lapho ukwakhiwa kuvunyiwe singasebenzisa ubuchwepheshe obuhambisanayo ukukhiqiza ivolumu ephansi yokwenza imishini edingekayo ngesikhathi esifushane ngezindleko ezifanele. Imishini iletha amandla, isivinini nokunemba; sakha i-geometry yamathuluzi, ama-fixture jigs nezingxenye zokuthola indawo njengokugijima okukodwa ukuthuthukisa ukuqinisekisa ukusetha okusheshayo nobukhulu obungaguquguquki. Izinga lethu lokunemba linciphisa umsebenzi wesandla futhi ligweme ukubambezeleka kwephrojekthi.
I-CNC Aluminium Machining Material Ibanga Esisebenza Nalo
I-Aluminium iyinsimbi esetshenziswa kakhulu engasetshenziswa. Ngenxa yokuguquguquka kwayo nokuzivumelanisa nezimo, kanye nama-alloys ayo amaningi, inokusetshenziswa okuhlukahlukene kwezimboni, kufaka phakathi imishini nokusetshenziswa kwamathuluzi. Kubiza okuphansi futhi ukwakheka kusho ukuthi kukulungele ukwenza prototyping, futhi izakhiwo zayo ezithile zikwenza kudume kuzo zonke izinhlobo zezinhlelo zokusebenza nemikhiqizo. Izingxenye ezenziwe ngomshini ezivela ku-aluminium zivame ukubiza kakhulu ngoba zingakhiwa ngomshini ngesikhathi esincane kunezinye izinsimbi eziningi ezifana nensimbi futhi azidingi ukuqedwa okwengeziwe.
I-Aluminium iza ngezindlela eziningi ezahlukene kanye namamaki. Uhlobo lwebanga le-aluminium olikhethayo ekugcineni lincike ekutheni uhlose ukuyisebenzisa kanjani insimbi. Ngemininingwane kuzo zonke izixazululo ezitholakalayo, ungahle uthande ukufunda i-Wikipedia isihloko ngale ndaba.
Icase Study 1: 5-axis CNC Milled Aluminium Reflector
Isibonisi se-Aluminium sisetshenziswa kakhulu kumamodeli wokugcina aphezulu, okungenye yemisebenzi eyinselele kakhulu ekukhiqizeni imoto. Ezimweni eziningi, abaklami bemikhiqizo banethemba lokuthi abenzi bemodeli bazokwazi ukuqonda ngokuphelele futhi banake yonke imininingwane abathintekayo, kepha kuphela abakhiqizi bezibonelo ezimbalwa abanolwazi abangafeza ukuhlinzekwa komklami we-optic. Singasho ngegama ukuthi isibonisi siyingxenye yokukhanya kwesibani, okungadlali nje kuphela indima ebonakalayo, kepha futhi kunquma ukubonakala kwesibani.
Silucubungula kanjani uhlobo lwe-Aluminium Reflector Prototype?
Inqubo Yokugaya i-CNC
Ingxenye Igama: HDLP-kugqame
Ithuluzi Lomshini: Umshini wokugaya we-5-axis CNC
Ubukhulu: 180mm * 120mm * 100mm
Inqubo ye-CNC: Ithuluzi lokusika: Machining Isikhathi:
Ukuqedela okwesikhashana R3.0 / R2.0 / R0.5 30h
Qeda-Machining R0.25 / R0.15 50h
Ukubheka ukwakheka okuyinkimbinkimbi, umshini we-5-axis CNC usazonqoba ubunzima lapho kusetshenzelwa yonke ingxenye. Abanjiniyela bezinhlelo ze-CNC, abathole ulwazi oluningi ekukhiqizeni izibani, bazokwenza ucwaningo ngokutholakala kwemishini ngemuva kokuthola imidwebo yomklamo.
Ngokuqondene ne-reflector, indawo ebonakalayo ebonakalayo izogaywa ngenqubo ye-CNC, kepha ohlangothini lwangemuva, kunesakhiwo esibucayi sokuhlangana okunzima ukusakhiwa yi-CNC milling ngoba izoshiya irediyasi enkulu emakhoneni. Ukuze uthuthuke, ochwepheshe badinga ukwenza i-electrode yethusi futhi basebenzise i-EDM njengenqubo yokusiza yokusiza ukusiza ukusula amakhona. Imvamisa le nqubo izothatha isikhathi esiningi.
Manje njengoba umsebenzi usucishe wenziwe, isinyathelo sokugcina ukusebenzela ukuphela kokuthunyelwe. Ukuphrinta, ukupholisha, ukugoqa, kanye neminye imisebenzi eyenziwe ngemuva kokucubungula izinto kubaluleke kakhulu, kuzonquma ngqo ukubonakala kokugcina.
Ngokuvamile, isikhombisi sasicelwa ukuthi sibe yisibuko esikhanyayo, kunezindlela ezimbili zokubona lo mphumela. Eyokuqala ukupholisha okwenziwa ngesandla, isisebenzi sizopholisha izingxenye kuze kube siyisibuko esikhanyayo, kufanele uqaphele lapho upholisha indawo ebonakalayo ngoba ezinye izinto zokukhanya zidinga ukugcina imiphetho ibukhali futhi inqubo ye-polish ingashiya i-radius emaphethelweni.
Enye indlela ukufaka isilayidi, ukuphela kokugaya okuhle futhi akukho ukungcola okudingekayo ngaphambi kokufakwa. Ngemuva kwakho konke okwenziwayo, indawo yokugcina ingacwebezela futhi ibe muhle.
I-Case Study 2: Ukuvikela izingxenye ze-Aluminium zedivayisi yezokwelapha
Le yiphaneli yedivayisi yezokwelapha ye-Institute of Ultrasonic Instruments egxile ekukhiqizeni umkhiqizo wePortable Colour Doppler. Iphrojekthi yesibonelo ukuvalwa kwe-ultrasound ephathekayo ye-ultrasound isibonakaliso sayo esinomsebenzi wokujikeleza wama-360 degrees. Kuyinto emisha nenqubekela phambili ekwakhiweni kwedivayisi yezokwelapha yokuthuthukiswa kwe-R & D kwamakhasimende.
Ukuqinisekisa isisindo esincane namandla okuvikela izinto zobuchwepheshe obuphezulu, iklayenti lalikhethe imishini ye-aluminium kuyo yonke imodeli yesibonelo.
Inselelo enkulu yalolu hlobo lwe-aluminium bekuwukukhanya kepha ukwakheka kwesakhiwo okuqinile ngenxenye eyodwa yemishini. I-CreateProto yenze i-fixture ngesikhundla esifanele sokucutshungulwa kwe-CNC kane noma ngaphezulu. Ngesikhathi senqubo yesibonelo esisheshayo, ukulungiswa nokuhlangana kubaluleke kakhulu kanye nokwelashwa kwendawo. I-CreateProto iyahlangana futhi ipholishe ngaphambi kokuqedwa kwesibonelo ukuqinisekisa umugqa womhlangano oqinile.
Isidingo sokuqedwa kwe-aluminium ukudweba kumodeli yesibonelo kwenze kwabukeka sengathi kuyizingxenye zangempela ezingathi zivela ekukhiqizweni ngobuningi, hhayi nje imodeli ejwayelekile yesibonelo. Sipenda iphrojekthi ngokuya nge-pantone No. lelo khasimende elinikeze ukuthungwa okuhle. Siyipenda ikhava yangaphambili matt umbala omhlophe sisebenzisa upende ongazweli otshwaleni. Ikhava yangemuva inokuthungwa okuhle kwamat mat black kusuka ku-Mold-Tech plaque impela kupende ongazweli otshwaleni. Isibambo sikupende njengesembozo sangemuva futhi nopende wenjoloba ngopende omnyama ukwenza isibambo sifane nokubamba kwangempela. Iphaneli yomuzwa wobuchwepheshe obuphezulu yekhibhodi yi-aluminium anodizing ukuze ube nomuzwa wokuqina.
Icase Study 3: CNC Aluminium RC Car Parts
Uma ungumlandeli wezimoto zeRC, khona-ke kufanele wazi ukuthi kunezinto eziningi ze-aluminium emotweni yeRC. Abadlali bavame ukuba nentshisekelo ezindaweni zomjaho ezingekho mgwaqo ezifana nedwala, ezingadingi kuphela isivinini esikhulu ngokwedlulele, kepha futhi zinezidingo eziphakeme kakhulu ekuqineni kwezinto zomzimba.
Kusho ukuthi isivinini esiphakeme sidinga ukuthi impahla yomzimba ikhanye ngangokunokwenzeka, futhi ukuqina kudinga ukuthi okokusebenza kube namandla ngokwanele. Izingxenye ze-aluminium yizinto ezisetshenziswa kakhulu ezimotweni zeRC, kufaka phakathi umzimba, ifreyimu kanye nehabhu lamasondo njalonjalo.
Ngenxa yemibono ehlukahlukene yokuqhubeka nokwenza ngcono ukusebenza kwemoto ye-RC, isidlali semoto se-RC sithambekele ekuthuthukiseni ukwakheka kwaso njalo, lolu hlobo lokufunwa kaningi alubuningi obuningi, kepha futhi ludinga ukuthola ingxenye ngesikhathi esifushane, ngoba ababambiqhaza bengafuni ukuphuthelwa umjaho ngenxa yokulinda izingxenye ezithile. I-CreateProto njengomkhiqizi wesibonelo omuhle ekunikezeni ukulethwa okusheshayo imvamisa kuyindlela yokuqala yokukhiqiza izingxenye zezingxenye ze-aluminium ze-RC, sinolwazi olunothile ekukhiqizeni imikhiqizo emincane ye-batch aluminium, futhi bangaqonda futhi babone ukwakheka komklami.
I-Case Study 4: Izingxenye Zomshini we-Drone / UAV / Robot CNC
Ekukhiqizweni kwezimboni zezingxenye ze-UAV / Drone neRobot, kufaka phakathi inkinga efana nezinto ezibonakalayo, inqubo, izindleko, ivolumu yokukhiqiza. Kunezingxenye eziningi ezingeke zikhiqizwe ngobuningi ngokusebenzisa inqubo ejwayelekile, ngakho-ke udinga ukusebenzisa inqubo ethile ekhethekile yezinsiza zokucubungula ezincane, futhi zingabandakanya isixhumanisi sokucubungula mathupha phakathi. Ngokuvamile, ikakhulukazi sisebenzisa i-CNC machining, i-silicone molding, i-tooling esheshayo nezinye ubuchwepheshe ukuqaphela ukukhiqizwa kwevolumu yangokwezifiso. Le yindlela enhle yesikhathi nezindleko, ukusheshisa umjikelezo wokuqaliswa komkhiqizo.
Izinto ze-aluminium noma i-carbon fiber njengengxenye ebalulekile yalezi zingxenye zidinga ukusetshenziswa kokusebenza okuphezulu nokunemba okuphezulu komshini we-CNC osebenza ku-clamping angaqedela yonke inqubo, kepha futhi ifakwe umtapo wezincwadi, futhi unethuluzi lokuzenzakalelayo shintsha umsebenzi. Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuqaphela ukulawulwa kokuxhumeka kwezimbazo ezintathu noma ngaphezulu ukuqinisekisa ukwenziwa kwethuluzi ngobuso obuyinkimbinkimbi.
Lesi sidingo esibucayi ngokungangabazeki siyizinselelo ezinkulu kubakhiqizi bezingxenye. Lapho umklami womkhiqizo eza uku-oda izingcezu ezimbalwa, kuvame ukuba nzima ukuphendula, yingakho abahlinzeki bokukhiqiza bavame ukuphendukela ezixazululweni ezenziwe ngomshini. Ngakho-ke, ukukhiqizwa kwevolumu ephansi kuxhumene kakhulu nomenzi wesibonelo, ukukhiqizwa okuhle kuhlala kunesipiliyoni esicebile nokuguquguqukayo ekunikezeni izixazululo ezinhle zezidingo ezihlukile.